MANGALATRA MORA, FIAINANA MORA
Profesora hareza nanomboka tamin'ny 1995,Nandritra ny 25 taona mahery, JIALI dia nanolo-tena hanome anao traikefa miharatra sy milamina kokoa noho ny fiharatra. Ny lovan'ny finoana "raha mbola misy ny fo, dia tsy misy fetrany ho amin'ny fahalavorariana", dia mitoetra ao amin'ny famerana tanteraka ny fenitra ara-teknolojia.
Manome hareza amin'ny solila tokana ka hatramin'ny enina izahay ary samy misy na lahy na vavy. Ny famolavolana miavaka dia tsy ny teboka mamirapiratra amin'ny fahitana ihany, fa ny maodely lamaody miaraka amina asa tena tsara koa dia mifangaro tsara amin'ny antsipiriany rehetra mba hamoronana traikefa fiharatana maharitra mandrakizay sy tsara ho anao.
Safidy vehivavy manja
Safidin'ny lehilahy milay
Ny tombony azo amin'ny asany
Blade, famolavolana, fitaovana, fanosotra lubricating ary fitadiavana mahita anao mitondra aina sy fahatsapana mandritra ny fiharatra.
Orinasa voafetra sy orinasa ara-barotra Ningbo Jiali plastika orinasa, hita ao amin'ny Ningbo Siansa sy ny Teknolojia Industrial Park. Mirefy 30 mu ny velarany, 25000 metatra toradroa ny velarany. Manana traikefa efa ho 20 taona tamin'ny famokarana ny hareza. Ny hareza lehibe ananantsika dia ny antsy efatra, ny triatra telo, ny lelan'antona ary ny hareza. Manana fampiasana hareza manokana koa izahay ao amin'ny fonja, fitsaboana ary ny sisa. Afaka mamokatra hareza 200 tapitrisa pcs isan-taona isika. Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Etazonia, Aostralia, Afovoany Atsinanana sy Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa, Ary koa manana fiaraha-miasa amin'ny "AUCHAN" SUPER MAX, hazo Dollar, ary orinasa malaza hafa izahay.
Ny orinasa dia misy mpiasa 320 eo ho eo, mpiasa ambony amin'ny fitantanana olona 45, injenieran'ny ambaratonga 8 olona, ​​mpiasa 40 olona, ​​mpanolotsaina teknika ivelany 2, diplaoman'ny oniversite na mihoatra ny 50. Ny ekipa dia manana ekipa matanjaka ho an'ny teknolojia. famolavolana, fanamboarana. Fivarotana sy serivisy. manana fisoratana anarana momba ny hareza mihoatra ny 20 izahay hatramin'ny 2008-2011. nahavita ny tsipika fivoriambe voalohany izahay ho an'ny lohan'ny hareza tamin'ny 2009. Ankehitriny dia mihoatra ny 10 napetraka amin'ity milina ity izahay amin'ny famokarana ny hareza. Ny kalitao dia tsara lavitra noho ny hareza izay mivory amin'ny tanana. Ankehitriny isika dia orinasa iray ihany no afaka mivory amin'ny masinina ao Shina. Ny orinasa dia nahazo ny ivon'ny teknolojia amin'ny hareza. Ary natolotra ho orinasa tso-po koa.
Ankehitriny dia manana milina fanindronana mandeha ho azy mihoatra ny 40 izahay. Masinina fitotoana milina 4. 15 ny tsipika fivorian'ny. 10 napetraka ny famokarana mandeha ho azy. Manana laboratoara ho an'ny antsy izahay. Ary afaka mizaha toetra ny hamafin'ny .fahahenjana sy ny zoro ny antsy. Ireo teknika ireo dia afaka manatsara ny kalitaon'ny hareza.
Ny orinasanay dia nandalo ny taratasy fanamarinana ny ISO9001 ： 2008 hampiakarana ny haavon'ny fitantanana kalitaon'ny orinasa, (Miompana amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.) "Kalitao avo, vidiny mirary, ary serivisy tsara indrindra" no fitsipiky ny orinasanay. Tongasoa eto mba hitsidika ny orinasa ary nifampiraharaha orinasa miaraka aminay. vaovao. Ny fanantenanay dia ny hamorona fifandraisana eo amin'ny samy mpandraharaha mahomby amin'ny fahombiazana.